Ukubaluleka kokufaka uphawu kwiprojekthi yegraphic | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukubaluleka kokufaka uphawu kwiprojekthi ebonakalayo Yinto esisiseko kuyilo. Umfanekiso wequmrhu kufuneka bonisa ngokuchanekileyo uthotho lweenjongo kunye neziseko zophawu, lo mmeli kufuneka ubonwe kuyo yonke imiba enxulumene nophawu lwentengiso. I-brand yinto ephilayo que iyakhula, iyatshintsha kwaye inobuntu, ngenxa yeso sizathu kufuneka Chaza ngokuchanekileyo ukuba uphawu lunjani kwaye lwenza ntoni.
Njengo umntu unobuntu kwaye izenzo zakhe zimenza abe yile nto ayiyo, kwenzeka okufanayo ngophawu okanye imveliso. Kule posi siza kubona umzekelo Ukufaka uphawu, umzekelo apho siza kujonga khona umanyano phakathi koyilo nefilosofi kunye nenqaku lophawu olumelweyo.
I-brand elungileyo ihlala inxulunyaniswa nobuntu ebeka indlela yabo yokusebenza phambi kwehlabathi langaphandle. Ukusuka intanda-bulumko uphakamise yonke into yakho ukupapashwa mayibe kugxilwe koku ukubonisa ukuba banjani kwaye bafuna ukuba yintoni. Siza kujonga imizekelo evela kwezinye iimveliso ezinkulu kwaye sixoxe ngamanye amanqaku aphambili.
1 Undoqo wophawu
2 Bonakalisa ubume bentsingiselo yemizobo
Yonke into ineempawu zayo, indlela yokusebenza ekwaziyo ukumela into eyiyo ngokwayo. Chaza ifayile amaxabiso brand Ngokuqinisekileyo linyathelo lokuqala. Uhlobo lwentengiso coca cola Ayilulo uphawu olulula lweziselo ezineswekile kodwa uphawu olumele oko usapho kunye nolonwabo. I-Coca-Cola ayisebenzisi umbala obomvu kuba iyitoni entle kodwa ngenxa ye- umbala weengqondo oku kumele, yiyo loo nto Iimpawu kufuneka zisekwe kwinto yokwenyani, Oku akuthethi ukuba masibeke bucala ubuchule bokwenza izinto kodwa endaweni yoko kufuneka sigxile kwicala elithile.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kwiintengiso ze coca cola Siza kuhlala sibona ipateni efanayo:
Ezinye iimveliso zithanda Nike basebenzisa iikhonsepthi ezinje amandla, ukomelela, amandla, ukoyisa xa kuziwa ekuchongeni kwihlabathi lezemidlalo. Luphawu olwenzelwe iimbaleki kwaye oku Siyayibona kumfanekiso wayo wobumbano nakuzo zonke iintengiso zayo. Ukusuka Igama elifanekisayo VictoriaI icon yayo imele speed, kunye nentengiso yayo ebonisa amandla omntu namandla, INike ikwazile ukuchaza amaxabiso ngokuchanekileyo.
Ezinye iimveliso zithanda Starbucks jolisa kumboniso ubuntu obumanyeneyo eluntwini ufuna ukufikelela ekusebenziseni amava omsebenzisi njengamandla ayo aphambili. Bona Abayithengisi ikofu kodwa bathengisa amava, intuthuzelo kunye nexesha langoku, ibhamuza apho unokuba kwimeko entle kwaye enomtsalane.
Bonakalisa ubume bentsingiselo yemizobo
Ukwenza isitshixo sophawu lubonakale sisitshixo ukufikelela kumanqaku amahle. Enkosi ngokusetyenziswa kwe ulwimi graphic Iimpawu zilawula ukukhupha zonke iingcinga zazo zethiyori kulwimi olubonakalayo. Nokuba kulungile nokusetyenziswa kokuchanekileyo mfa nekiso okanye kunye ukupapashwa esekwe kwindlela yohlobo lophawu, injongo kukuguqula onke amaxabiso abe yimifanekiso.
Coca Cola imele yabo amaxabiso osapho kunye nokuzithemba Ngokusebenzisa imizobo yentengiso kunye mabala apho babonisa khona ezo ngcamango.
Guqulela amaxabiso abo kwi mabala ilayishwe yimvakalelo apho abantu beyona nto iphambili. Iiplanethi ze amaxesha okonwaba, uthando, ubunye kunye nomoya oqinisekileyo. Kungumnqa ukubona ukuba eyona nto iphambili kuphawu lwakho, isiselo esithambileyo sihamba ngasemva. Akusekho malunga nokuthengisa into kodwa malunga thengisa iimvakalelo.
Nike Isebenzisa amandla emifanekiso yeembaleki ezikhethekileyo, amabali okuphucula ubuqu apho nabani na angagqwesa kwaye abe ngcono.
Umboniso wemizobo yentengiso yeNike imiyalezo yokuziphucula apho nabani na anokuzenzela, le yenye ye Iintsika zolu phawu ezemidlalo.
Sebenzisa abantu abanomzimba weembaleki owenza imidlalo, ebonisa izakhono kwi ukuphucula kunye nobunkokheli. Ukuba sijonga zonke iintengiso zeNike siyakuhlala sibona esi simbo sinye.
"Iglasi esayiniweyo elula ayisiyo iglasi esayiniweyo elula" Iglasi esayiniweyo ibonelela ngombono wokuba ngowakho, iglasi yeyomsebenzisi obizwa ngegama lakhe. Oku kuyaphumelela Nxibelelana nomsebenzisi kuhlobo, Ayiseyiyo ikofu kodwa ikofu yalomntu wayenxile kwindawo ababembiza ngegama.
Njengoko sibona Iimpawu zihlala zinento ngasemva ezenza zomelele kwaye ziqinile. Ukwenza umsebenzi wophawu awudingi ukuba ube sisigidi sezigidi ngezigidi, yonke into oyifunayogqibezela uphawu kwaye ubonakalise ukuba yintoni na ngokomfanekiso Ngoncedo lweengcali ezikhethekileyo, kulapho inani lomyili liya kusebenza khona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Ukubaluleka kokufaka uphawu kwiprojekthi ebonakalayo